192.168.8.1 - Waa maxay kulkulleeyaha WiFi?
WiFi hotspot waa dhibco helitaan nadiif ah oo kuu oggolaanaya inaad ku xirto shabakad WiFi ah kombiyuutarkaaga, taleefannada casriga ah ama qalab kasta marka aad ka maqantahay xafiiskaaga ama shabakadda guriga.
Ganacsiyo fara badan, magaalooyin, iyo xarumo kale ayaa bilaabay inay soo bandhigaan WiFi kulkulul taasi waxay ka caawisaa dadka inay ku xirnaadaan isku xirnaansho internet oo dhaqso badan oo dhaqso badan kana dheereeya shabakadaha mobilada gacanta.
Weli waa maxay hotspot WiFi & sida ay u shaqeyso? Goobaha dhibku ma aamin yihiin? Hoos ka aqri dhammaan macluumaadka aad rabto.
Sidee buu u shaqeeyaa WiFi hotspot?
Goobta WiFi ee bulshada ayaa u shaqeysa si la mid ah isku xirka Wi-Fi ee aad ka heli karto xafiiskaaga ama gurigaaga. Goobaha WiFi waxay ku shaqeeyaan iyagoo leh xiriir internet & isticmaal aalad gaar ah oo wireless ah, tusaale ahaan router-yada & moodejyada, si loo abuuro xiriir wireless, meesha aad ka xiriiri karto taleefanka casriga ah, kaniiniga, PC, ama qalab kale.
Xawaaraha, awoodda, kala duwanaanta, & qiimaha aaladda kulkulul WiFi way kala duwanaan karaan. Weli fikradda guud ee ka dambeysa aaladda kulkulullada WiFi waxay la mid tahay shabakadaha WiFi ee guriga ku saleysan, & waad ku xiriiri kartaa & adeegsan kartaa aaladda WiFi kulkulul si la mid ah waxaad u isticmaali kartaa shabakad WiFi ah oo gudaha ah.
Noocyada goobaha kululaynta ee WiFi
Goobaha AlThough WiFi guud ahaan waa isku mid, waxaa jira noocyo kala duwan oo goobo kulkulul ah oo la heli karo, waxayna leeyihiin kala duwanaansho yar oo cad.
Goobta WiFi ee dadweynaha
Goobaha WiFi ee dadweynaha waa sida ay u muuqato. Goobaha noocan oo kale ah badanaa - inkasta oo aysan ahayn waqti kasta - waa bilaash in la isticmaalo. Goobaha sida makhaayadaha, maktabada dadweynaha, dukaamada tafaariiqda, iyo ururada kale & shirkadaha noocaas ah waxaa laga yaabaa inay bixiyaan qad bilaash ah oo WiFi ah oo loogu talagalay macaamiisha. In yar oo magaalooyin ah, maareeyayaasha madaniga ah ama ISPs ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku bixiyaan isku-xirka WiFi-ga dadweynaha bilaash meelaha qaarkood. Kuwani badiyaa waa bilaash, wali meelo kooban, sida garoomada diyaaradaha & hudheelada, waxaad u baahan tahay inaad lacag bixiso si aad u gasho barta bulshada ee WiFi.
Goobaha WiFi ee telefoonka gacanta
Waxaa jira noocyo kaladuwan oo kulkulul moobiillada. Tusaale ahaan, ma ogtahay inaad u adeegsan karto iPhone-ka sidii Wi-Fi meel kulul? Wax la mid ah ayaa ku habboon taleefannada casriga ah ee ugu waaweyn Android. Kaliya shid muuqaalkan taleefankaaga & wuxuu adeegsanayaa xogtiisa gacanta si aad u abuurto meel kulkulul ah oo WiFi ah. Mar dambe, waxaad la xiriiri kartaa barta kulkulul ee kombiyuutarka PC ama qalab kale oo aan ku jirin xogta gacanta.
Sidoo kale waxaad iibsan kartaa ujeeddo-u-dhisay Wi-Fi mobilada ujeedada leh oo loogu talagalay in loogu beddelo isku-xirka macluumaadka taleefanka gacanta xiriir adag oo WiFi ah. Shakhsiyaadka shaqada u dalxiis taga ama had iyo jeer u baahan helitaanka isku xirnaanta aaminka ah ee WiFi ayaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan mid ka mid ah aaladaha noocaas ah ee laga iibsan karo inta badan shirkadaha taleefannada gacanta.
Goobaha kulul ee horay loo bixiyay
Goobaha WiFi ee horay loo siiyay waxay la mid yihiin meelaha kuleylka gacanta, wali waxay leeyihiin xaddidan xog ah oo aad isticmaali karto. Waad bixin kartaa lacagtan xogtaan, ka dib markaad dhiciso, waxaad si otomaatig ah u iibsan kartaa wax badan. Tani waa hab fiican oo lagu helo hotspot-ka gacanta iyada oo aan la is qorin xogta moobiilka ee dheer.
Habka ugu fudud ee lagu heli karo barta kulkululleeyaha WiFi waa furitaanka kombuyuutarkaaga ama mobilkaaga & bilawga raadinta Meelo dhowr ah oo dadweyne ah, waxaad ku ogaan doontaa inay jiraan goobo badan oo furan oo furan oo WiFi ah oo aad ku xiri karto, oo bilaash ah. Xitaa waxaad ka raadin kartaa meelaha kulkulul WiFi ee ay bixiso shirkadaada ISP.